आज फागु पूर्णिमा, पहाडी क्षेत्रमा फागु पर्व मनाइँदै
काठमाडौं । फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने फागु अर्थात् होली पर्व आज हिमाली एवं पहाडी जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ । वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिई आउने फागु पर्व आज परम्परागत रूपमा विभिन्न ...
समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम संगको अन्तरक्रिया
अपन दैनिक संवाददाता, सिरहा । नेपाल प्रहरीले शान्ति र स्थायित्वका लागि विभिन्न निकाय संगको समन्वयमा “समुदाय प्रहरी साझेदारी” कार्यक्रमद्वारा स्थानीय तह, समुदाय, समाजिक संघ संथा तथा विद्यालय संगको साझेदारीमा सञ्चालन ...
पुरोहित तथा मौलानाले अब सिरहामा जन्मदर्ता हेरर मात्र विवाह गराउने
अपन दैनिक संवाददाता, सिरहा । विवाहमा केटाकेटीको जन्मदर्ता वा नागरिकताको प्रमाणपत्र हेरेर मात्र काम गर्न सिरहाका पण्डित तथा मौलानाल सहमत भएका छन् । जिल्लामा बालविवाह गर्नेको संख्या दिन दिनै बढ्न थालेकाले प्रहरीसँगको सहका ...
केहीबेरमा खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्दै, कुन राशिकाले हेर्न हुन्छ, कुनले हुँदैन ?
काठमाडौं । अहिले केहीबेरमा खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएको छ । नेपाल पञ्चांग निर्णयक समितिका अनुसार अहिले बिहान ८ः४२ मिनेटमा ग्रहणले स्पर्श गर्नेछ । पश्चिम र नैऋत्य कोणको बीचबाट बिहान ग्रहण सुरु हुनेछ । बिहान १०ः०१ बजे ...
काठमाडौं । नेपालसहित विश्वभरका क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरूले आज क्रिसमस डे पर्व मनाउँदैछन् । हरेक वर्ष २५ डिसेम्बरमा येशु ख्रिष्टको जन्मदिनको खुसियाली मनाउने परम्पराअनुसार क्रिश्चियन धर्मालम्बीले क्रिसमस मनाउन लागेका हुन् । दु ...
नेपालमा पहिलो पटक' Sastodeal ले Nokia 7.2 बेच्न शुरू गर्यो
केवल रु २३,९९९, विश्वव्यापी सस्तो मूल्य ।उदासीन नोकिया ट्युन याद आयो ? नयाँ Nokia 7.2 विश्वव्यापी सस्तो मूल्य मात्र २३,९९९ मा Sastodeal मा उपलब्द छ । हो ! तपाईंले सही पढ्नुभयो, रु ३३,९९९ एमआरपी बाट मूल्य घटेको छ । यो स्मार्टफ ...
समुदायसंग प्रहरी अन्तरक्रिया सम्पन्न
पौष २, २०७६
सिरहा । सिरहाको सिरहा नगरपालिका वडा नम्वर १ मा मंगलवार समुदायसंग प्रहरी अन्तरक्रिया भएको छ । विपन्न सीमान्तकृत समुदायका नागरिकहरुको सुरक्षामा पहुँच अभिवृद्धिको साथै प्रहरी र नगरिकबीचको विश्वास बढोस भन्ने उदेश्यले आयोजना ...
जाजरकोट । विवाहमा केटाकेटीको नागरिकताको प्रमाणपत्र हेरेर मात्र काम गर्न यहाँका पण्डित सहमत भएका छन् । जिल्लामा बालविवाह गर्नेको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्न थालेकाले प्रहरीसँगको सहकार्यमा पण्डितहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ...
आज भाईटिका, टीकाको साइत ११ बजेर ५५ मिनेटमा उत्तम
अपन दैनिक संवाददाता, सिरहा । आज यमपञ्चकको पाँचौ दिन अर्थात भाई टिका । चेलीले माईलीलाई सप्तरङ्गी टिका, फुलको माला लगाई सेलरोटी लगायत मिठा मिठा परीकार खुवाई भाई टिका लगाई दिन्छन ।टिका लगाई सकेपछि चेलीलाई गक्ष्य अनुसारको दक्षीणा ...
राष्ट्रपति भण्डारी र सीबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उनका चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङबीच द्विपक्षीय वार्ता भएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटवार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्धका विविध पक्षमा विचारविमर्श भएको छ ।राष्ट्रपति कार्या ...